Ungangibonisa yini indlela ewusizo yokudala i-backlink namawebhusayithi e-EDU?
Asikho isidingo sokuthi ngisho ne-backlink eyodwa ku-website ye-EDU ingaba yigugu kakhulu kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi, kunokuba iphakethe lalabo abajwayelekile eliphethe ikhasi eliphakeme le-PageRank. Ngeshwa, ukuxhunyaniswa nemithombo yemfundo akulula njengoba ungacabanga. Kodwa nginezindlela eziningi zokusebenza zokuqedela umsebenzi - ngokukhiqiza okuqukethwe kwezemfundo ephezulu ukuze uthole le backlink efanelekile kusuka kusizinda se-dot EDU. Futhi ngezansi ngizobukeza lesi sinyathelo isinyathelo ngesinyathelo - trampolino elastico per bambini prezzi.
Ungathola i-backlink kusuka kuwebhusayithi ye-EDU - ukuthuthukisa ubudlelwane obuhle, ngokwesibonelo namayunivesithi noma amakolishi, ukuze banikeze ucezu lokuqukethwe komsindo kulokho. Kodwa-ke, phawula ukuthi kuyoba umsebenzi ochitha isikhathi okwenziwe ngokwakho. Yingakho ngaphambi kwanoma yini enye, kuyodingeka ucabange kahle uma ungakwazi ukuphatha ukubhala okuqukethwe okuphakeme kwezemfundo ngokwakho, noma uzinikele kubalobi abanobuchwepheshe - noma ukuwadlulisela kubanikazi bama-freelancers abanekhono noma ucabange ukuqasha umthengisi wokuqukethwe ngokugcwele.
Yiqiniso, kunezinye izindlela zokuzikhethela ezingase zithathe kancane kancane. Noma kunjalo, iningi lazo lingachazwa kalula njengogaxekile, uma lingenzi kahle ngokugcwele. Ngakho-ke, ngikholelwa ukuthi kungcono uzama ukuthola i-backlink kusuka kuwebhusayithi ye-EDU ngokuqukethwe kwekhwalithi noma kunjalo.
Beka ukugxila ekudaleni isihloko esiphezulu nesiyingqayizivele esizobheka izithameli ezihlosiwe - ngalesi sikhathi ungase ubhekane nabafundi bekolishi, abafundisi noma abasebenzi amalungu aphethe. Ukwenza kanjalo, khumbula ukuthi kufanele unikeze okuqukethwe komculi okungasetshenziswa ngempela ngenhloso yemfundo - okuzodinga ukuthi usebenze ucwaningo olujulile noma okungenani isethi yamakhono okuphila abalulekile.
Sekuyisikhathi sokufika ebhizinisini bese uqala ukufinyelela. Kunezindlela eziningana ezisebenzayo zokuthuthukisa ubudlelwane obuhle nabantu abalungile. Nansi indlela ongabakhohlisa ngayo ukuthumela okuqukethwe kwakho kobuchwepheshe nokuxhumanisa kuwebhusayithi yakho noma kubhulogi:
Okokuqala, ngincoma ukuthi iphrojekthi ezuzisayo yokuthuthukiswa, isibonelo ngokubambisana namaprofesa aseyunivesithi noma ekolishi. Konke okudingayo lapha nje ukuthola ukuthi yiziphi izihloko ezaziyoba nesithakazelo esiphezulu samanje kanye nenani eliphakeme kubo bonke - kokubili othisha, nezikhala zendawo. Ngaleyo ndlela, konke okuvunyelwene ngakho kusengaphambili - ukhululekile ukuqala ukubhala okuqukethwe kwezemfundo okuzoshicilelwa kwiwebhusayithi yabo yeklasini evunyelwe lokho.
Okulandelayo, zama ukudala ukubambisana kosizo - ngokungathí sina, kunamakholeji amaningi azimisele njalo futhi alungele ukuthumela abaxhasi bawo. Konke okudingayo lapha ukunikeza ukusebenzisana okuzuzisayo - qiniseka ukuthi okuqukethwe kwakho kukhuluma ezindabeni ezifanele, njengokubambisana kwakho okuqhubekayo ngokwayo, noma ezinye izingxoxo zengxoxo yekolishi ezidinga ukunakwa okubanzi komphakathi.
Umphakathi we-University blogging
Ungase uxhumane nabakhudlwana be-univesithi - bese umane unikeze ukunikeza ukuthumela izivakashi zebhulogi kumakhasi abo ezemfundo ukuthola i-backlink kusuka kusizinda se-dot EDU. Cabanga nje ukuthi ungabenza kanjani bajabule ukuthumela okuqukethwe kwakho - cabanga ngokuhamba ngokuzungezile ubuchwepheshe bokusebenza, iseluleko sokusesha umsebenzi, othintana nabo be-postgraduate noma izindaba zempumelelo, njll.
Gcina ukulandelela yonke i-backlink yakamuva kumawebhusayithi e-EDU uma ihamba bukhoma. Ngesikhathi esifanayo, ngincoma ukuthi "pinging" umthombo wesixhumanisi ngasinye esanda kudalwa usebenzisa i-pingmyurl. com noma yimuphi amanye amathuluzi afanayo e-intanethi. Ukwenza kanjalo, uzobiza ukusesha kwe-search yokusesha ukuze wenze i-backlink yakho entsha ibonakale ngokushesha, ngakho-ke ifuna ukunyuswa kokusezingeni okusheshayo.